တကယ်ကုန်းတဲ့ ကျနော်မိန်းမ – Grab Love Story
by phyu June 9, 2021
ကျနော် ဘဝ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ။ကပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ့် စမ်းချင်တယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော် အတွေ့အကြုံ ခံစားချက် ပြောပြချင်တာရယ်။ကောင်းကျိုး ဆိုကျိုး အကျိုအပြစ် အပေါ် သိရှိနိုင်ပါစေ ဆိုပြီး ဦးကိုကိုကြီး ဆီမှာ ကျနော့် အကြောင်းပြောပြရေးခိုင်း ခဲ့တာပါ့။ကျနော်ပြောပြတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းအရာ အရ သူငယ်ချင်းတို့ တစ်ခုခုခံစားသိခဲ့ရရင် ပြောရကျိုးနပ်ပါပြီး။
ကျနော် ဦးကိုကိုကြီးက ပြောတယ်သူ  ကပ်ကို ယောင်္ကျားရဲ့ စိတ်ခံစားချက် အမြင်ဘက်ကနေ နေပြီး ရေးပေးပါမယ်။တော်တော်များများ ကပ်ကို ဇတ်လမ်းဆိုတာ ယောင်္ကျားခွင်ပြုချက်နဲ့ စတာပါ။ဒါပေမယ့် ကပ်ကို ယောင်္ကျားရဲ့ အမြင်ဘက်ကနေ ရေးတာ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ သူဖီလင် သူခံစားချက် ကို မြင်သာအောင် ရေးတာ ဖြစ်တယ် အတွက် ကပ်ကို စမ်းချင်တယ်သူတွေလည်း စမ်းရင် ဘယ်လိုခံစားချက် ဖြစ်ပေါ်လည်း သိရအောင်ပါ။ဒါပေမယ့် အာနည်းချက်ကတော့ မိန်းမ စည်းရုံချင်တယ်သူ မိန်းမ ပေးဖတ်ချင်တယ်သူ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေမယ်ပေါ့။မိန်းမ ပေးဖတ်ရင် သူ ယောင်္ကျားရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကို မြင်ရင်တော့ မြင်မှာပေါ့။
ယောင်္ကျားလေး သဘာဝအရ acc တစ်ခုကို လွန်းခဲ့သော သုံးနှစ်လောက်က စဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလို ဟိုဒီသုံးရင် အရမ်းစိတ်ဝင်စား နှစ်ခြိုက်မိလားတာက  ကပ်ကို ဇတ်လမ်းတွေကိုပါ။ကိုယ့်မိန်းမကို တစ်ခြားတစိမ်း တစ်ယောက်က တက်ခွလိုးနေတာမျိုး ကြည့်နေရတယ့် ဖီလင်း ဖီလ်မျိုး ခံစားကြည့်ချင်လားပါတယ်။
ကပ်ကိုကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ကျနော်က လိင်မူစွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျတယ်သူ မဟုတ်သလို့ ကျနော်လီးကလည်း ခြောက်လက်မနဲ့ ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ရှိပါတယ်။ အဲဖီလ်ကိုသက်သက် ကြိုက်ကို ကြိုက်မိနေတာပါ။မိန်းမတော့ မပြောရဲသေးဘူးပေါ့ တော်တော်နဲ့။တစ်ရက်ကျ မိန်းမကို ကျနော် တက်ခွလိုးနေတုန်း အဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ ပြောပြမိလိုက်တယ်။
အဲ့တော့ မိန်းမက ကိုကို ဇတ်လမ်းဆင်ပြီးပြောချင်ပြောလေလို့ ခွင့်ပြုချက်စရခဲ့တယ်။ပျော်လိုက်တာမှ ဗျာ ပြောစရာ စကားမရှိအောင်ပါပဲ။အဲ့လိုနဲ့ ကျနော်စိတ်ပါလာတိုင်း မိန်းမကို တစ်ခြာသူ တက်လိုးနေတယ်ပုံမျိုး ပြောလိုးရင်
နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်ညီညီ လိုးခဲ့ကျတယ်။အရမ်းစိတ်ကျေနပ်ရတယ့် အချိန်ပါပဲ။
နောက် တစ်ဆင့်တက်လာခဲ့တာကျ မိန်းမကို ကျနော်နဲ့ မရခင်းက ရည်းစားတွေ အကြောင်းမေးမိတယ်။အရင်ကတော့ မရှိဘူး ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဘူးညာဖြေနေကျ။ အဲ့နေကတော့ မိန်းမလည်း စိတ်ပါနေတယ်နဲ့ တူတယ်။သူအရင်ဘဲက ဘယ်လိုနမ်းတာ နို့ဘယ်လိုစို့တာ စောက်ဖုတ်ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်တာတွေ ပြောပြတယ်။လူကို ရင်ထည်းမှာ ဒိတ်ဆိုသွေးဆောင့်တိုးလိုက်သလိုပဲ လိင်တန်ကလည်း တဆတ်ဆတ်မာလာပြီး လိုးတာ လိုးတာဆိုတာ အောက်က မိန်းမကော့ပျံနေတာပဲ။
နောက်နေ့ကစ လိုးတိုင်း သူအရင်ဘဲနာမည်းတွေက ကျနော် နာမည်ဖြစ်လားခဲ့တယ်။သူကလည်း သူဘဲ အရင်နာမည်းတွေ ခေါ်ခေါ်ပြီးလိုးခိုင်းတယ်။မိန်းမလည်း အရင်နဲ့မတူအောင် အပြီးမြန်လာသလို ကျနော်လည်း အရင်နည်းမတူအောင် ထန်လားတယ်။အားအားရှိ အဲ့ဒီဇတ်လမ်းပဲ ပြန်ဆက်ပြီး အိပ်ခန်းထည်း သွားချင်တယ့် စိတ်ပဲ လွမ်းမို့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က ကာမနိတ်ဗာန်ရောက်နေရသလိုပါပဲ။
အရင်းက အကြောင်း အရင်းဘဲတွေအ‌ကြောင်းနဲ့တောင် ဒီလောက်ကောင်းတာ ဖြစ်လာတယ်။ဒီလောက်လေနဲ့တောင် အဲ့လောက်ကောင်းတာ တကယ်ပေးလိုးရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလည်း ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လားတယ်။မိန်းမလည်း စိတ်ပါလာခဲ့တယ် တကယ်ကောင်းကောင်းခံစားရတာကိုနော်။အဲ့တော့ ပြောပြမိတယ် မိန်းမရေး တခါလောက် စမ်းကြည်ကျရအောင်ပါ ဆိုပြီး။အဲလိုပြောတော့ မိန်းမက သူသဘောကျတယ်သူဆို လက်ခံမယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောလားတယ်။
မိန်းမသဘောကျတယ့်သူ ရှာဖွေးရေး လုပ်ငန်းကြီး စတော့တာပေါ့။အဲ့တော့ ကျနော်တို့ အကြောင်းပြောပြရရင် ကျနော်နာမည်ကဝေယံလင်း ပါ ဆိုက်တစ်ခုက တာဝန်ခံ အရာရှိ တစ်ယောက်ပါ။ မိန်းမ နာမည်က ဖူးဝေစိုးပါ။ကျနော်က တာဝန်ခံ အရာရှိဆိုတော့ သိတယ်အတိုင် ငယ်ငယ်ချောချောလှလှလေ ယူထားတာပေါ့။ကျနော့် မိန်းမ အလှ ပြောပြရင် ကြွားတယ်ထင်မယ် မပြောတော့ပါဘူး ဇတ်လမ်းပဲ ပြောပါတော့မယ်။
အဲ့မှာ ကျနော့်အမှားက လူရင်းတွေထည်းက ပြမိတာပဲ။ကျနော်လက်အောက်က အရာရှိနှစ်ယောက်ကို မိန်းမကိုမေးမိတယ်။တစ်ယောက်က အသက် 28 နောက် ယောင်္ကျားပီပီသသရုပ် ဒေါင်ကောင်းကောင်း အသာညိုညို။နောက်တစ်ယောက်က အသက်22 အသာဖြူဖြူ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ခပ်ပိန်ပိန်။နှစ်ယောက်လုံး ဆိုက်မှာ အရေးပါတယ်သူပဲ။ကျနော် အထင် အသက်ကြီးတယ်သူကို ကြိုက်မယ်ထင်တာ သူက သူနဲ့ရွယ်တူ ကောင်းလေးကို ရွေးတယ်။သဘောကျတယ် အဆင်ပြေရင်နေမယ် ပြောလာတယ်။
အဲ့တာနဲ့ မိန်းမ မင်းနည်းနည်းလူပ်ရှားကြည့်ဆိုတော့ မိန်းမလည်း အဲ့ကောင်းလေး ရှေ့ရောက်ရင် ဘော်လီးပြင်ရတာနဲ့ ထမိန်းအောက်စလွတ်ပြရတာနဲ့ လူချင်သွားထိရတာနဲ့ ကောင်းလေးကလည်း မထိတထိပြန်လုပ်လာပြီး အဆင်ပြေနေခဲ့တယ်။ လူကြီး မိန်းမဖြစ်နေတော့ ကောင်းလေးကလည်း ဇွတ်မတိုးရဲဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ကာလမှာတော့ ကျနော်က အဲ့ကောင်းလေးအဖြစ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်ထန်းနေခဲ့တာပေါ့။
တစ်ရက် အဲ့ကောင်းလေး အဖြစ်နဲ့ မိန်းမကို လိုးပေးနေတုန်း မိန်းမက တောင်းဆိုလားတယ်။
အဲ့နေ့က မှတ်မှတ်ရရ ဆောင့်တွင်းကြီး ကျနော်လည်းသောက်ထားတယ့် အရှိန် ထွေထွေနဲ့ အဲ့ကောင်းလေ အဖြစ် လိုးနေတုန်း တောင်ဆိုလားပါရော့။သူနဲ့ဒီနေ့ နေ့ချင်တယ်တဲ့ ဒီနေ့မှ မရရင် နောက်နေ့ကစပြီး အဲ့ ကပ်ကို ဇတ်လမ်းတွေနဲ့ လိုးတာတွေ တောင်းဆိုတာတွေ မလုပ်ရတော့ဘူးဆိုပြီး ကျနော် အရမ်းကြိုက်တယ်အရာနဲ့ အကြပ်ကိုင်ပါလေရော။ကျနော်လည်း အေးဟာ ငါသွားကြိုးစာကြည့်မယ် ဆိုပြီး အရက်ရှိန်ထွေထွေနဲ့ ဆိုက်ထည်းကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
ကံမကောင်းတာလား ကံကောင်းတာလား မသိ ဆိုက်ထည်းမှာ မီးလူံးနေတယ် ကောင်လေးကို တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတာ တွေ့ပါရော့။စကားကလည်း ဘယ်လိုပြောရမှန်မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။နောက်က မိန်းမကလည်း ဇွတ်တောင်းဆိုထာတာဆိုတော့ မျက်နှာပူပူနဲ့ သူဘေးကပ်ထိုင်ရင်း ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း စကားစရတာပေါ့။အဲ့တာနဲ့ စကားလမ်းကြေားကို ကိုယ်လိုရာဆွဲယူရင် ငါကွား ပန်သေးသလို ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်လား ဘာညာနဲ့ပေါ့ ။အဲ့တာ ကပ်ကို ဘာညာ ကြည့်ရင် ထလားရော့ ။ကပ်ကို ကြိုက်နေတာ ဘာညာပေါ့။မင်းငါကိုနည်းတည်း ကူညီးပေးပါလား။ငါ့ မိန်းမကို ငါ့ကိုကူပြီး နည်းနည်း ဆွပေးပါလား ဆိုပြီး အကူအညီးတောင်းလိုက်တယ်။သူက ကြောက်တယ် ဘာညာပေါ့ မကြောက်ပါနဲ့ လားစမ်းပါဆိုပြီး ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်။လူလည်း ထူပူနေတာပဲဗျ ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီးပြောရတာပဲ။မပြောပြန်ရင်လည်း မိန်းမက သိတယ့်အတိုင်း။
အိပ်ခန်းထည်းလည်းရောက်ရော့ ကျနော်တောင် ဘာမှ မပြောရသေးဘူး။ဟိုကောင်းက မိန်းမကို ချစ်လားမေးပြီး ကစ်စင်တန်ဆွဲတာ။ကျနော်တောင် ဘေးက ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးမှ ဟိုကောင်းမိန်းမကို ဖက်ပြီး နမ်းနေတာ ကြည့်နေရင် ကျနော်လည်း စိတ်တွေတော်တော်ထလားတယ်။ဒါကိုမျော်လင့်နေခဲ့ရတာကြာပြီးလေ။ခုမှ မျက်စိရှေမှာ မျော်လင့်နေတာကိုကြည့်ခွင့်ရတာ။ကြည့်နေရင် လူက စိတ်တွေအရမ်းထလားတာနဲ့ မိန်းမနားကပ်ပြီး နို့တွေနယ်လိုက် စောက်ဖုတ်နိုက်လိုက် လုပ်ပေးနေမိတယ်။ကျနော်လည်း အဲ့လိုလုပ်ရော့ ဟိုကောင်းကပါ နို့တွေကိုင်လိုက် ဖင်နိုက်လိုက် ဖင်တုန်ကြီးတွေ ဖျစ်ညစ်လိုက် စောက်ဖုတ်ပွတ်လိုက် လိုက်လုပ်ပါလေရော့။ဒီကောင်းက ဖက်ထားရင်နမ်းနေတာ ကျနော်က ဘေးက လုပ်နေတာဆိုတော့ ဒီကောင်လည်း လိုက်လုပ်ရော့ ကျနော်က ဘေးရောက်သွားသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။
အဲ့တာနဲ့ ကျနော်လည်း အိပ်ခန်းထည်းကနေ အိမ်းသာဘက် ခနထွက်ပြီး အိမ်သာတက်ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်တယ်။လွပ်လွပ်လပ်လပ်လုတ်ရဲအောင်ပေါ့။ပြီးပြန်ဝင်လာတော့ မိန်းမ အပေါ်အဝတ်တွေ‌ကော ထမိန်းကော ချွတ်ချ ထားပြီးပြီး ။ဟိုကောင်က နို့တွေ အာရပါရစို့ လိုက် နယ်လိုက် နူမ်ခမ်းချင်းနမ်းလိုက် စောက်ဖုတ်ကလိလိုက်နဲ့ တစ်ချက်မှ မနားဘူး။တရစပ် အားကို မအားဘူးရယ်။
အဲ့မြင်ကွင်း မြင်ရတော့ ရင်ထည်းတစ်ခုခု ဆုံးရူံးရလို့ နှမြောသလို ဝမ်းနည်းသလို့ ဟာတာတာ ခံစားရတယ်။
နှစ်ယောက်သား ဝင်လာတုန်းကအတိုင်း မက်တပ်ရက်ကြီးနဲဆိုတော့ မိန်းမကို သနားလို့
မိန်းမရေး အဲ့အတိုင်ဆို ညောင်းနေမှာပေါ့ မွှေယာပေါ်လာလေဆို ခေါ်လိုက်တာ သကောင်းသားက မပြောရဘူး တက်လိုက်လားတယ်။မိန်းမ‌ကို အလည်မှာ နေခိုင်ပြီး ဟိုကောင်းက ဟိုဘက်နို့စို့ ကျ‌နော်က ဒီဘက်နို့စို့ပေါ့။မိန်းမ အဖုတ်ကို ပွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လှမ်းကိုင်လိုက်တာ အရေတွေရွဲနှစ်နေတာပဲ။အိမ်ထောင်ကျလားတာ ကြာပြီး အဲ့လောက်ရွဲနစ်နေတာ မတွေ့ဘူးဘူး။အဲ့တာနဲ့ မိန်းမထနေပြီး ကျနော်ပြီးရင် တက်လိုးမယ်ပေါ့။မလိုးခင် ဟိုကောင်ကို စောက်ဖုတ်ခန ပေးယက်လိုက်မယ်ပေါ့ ကျနော်အတွေးက။အဲ့တာနဲ့ မိန်းမ ပေါင်စိထားတာလေးကို ကာခိုင်းလိုက်တယ်။
” မိန်းမ အဖုတ်လေးကို မင်းခန ယက်ပေးလိုက်ပါအုံး”
ပေါ့။ဟိုကောင်းက မိန်းမပေါင်းကြားထည်း ဝင်ပြီး စောက်စိလေစုပ်ပေးလိုက် စောက်ဖုတ်လေယက်ပေးလိုက်ပေါ့။မိန်းမကော့ပျံနေတာပဲ စိတ်တွေအရမ်းထပြီး။ခနပဲ စုပ်ပေးယက်ပေးပြီး ဟိုကောင်ထလားတယ်။ထလာမှာပေါ့ မိန်းမက မနေ့က ရေချိုးပြီးကတည်းက သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ရသေးတာ။ပြီးတော့ ခုနက ကျနော်က လိုးလက်စတက်လန်းကြီး ထွက်လားတာလေ။
ကျနော်လည်း တင်နေပြီးလေ လိုးတော့မယ်ပေါ့။ဟိုကောင်းက ပေါင်ကြားထည်းက မထွက်သေးဘူး။အဲ့တာနဲ့
ပေါ့။မိန်းမက သူလီးကိုင်ထုပေးကျနော်က တက်ခွလိုးတော့မယ် လို့ကြံထားတာ။
လို့ မိန်းမက ပြန်ပြောနေတော့ မိန်းမလက်လေးယူပြီး ဟိုကောင့်လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တာ။မိန်းမက လီးကိုင်ပြီး လီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေတယ်။အဲ့မှာ ဟိုကောင်းက ဘွတ်ဆို ဆောင့်ထိုးလိုက်တာ။ဟိုကောင့်လီးကြီး မိန်းမ အဖုတ်ထည်းလည်းဝင်ရော့ မိန်းမက ကော့တက်လာပြီး ဆတ်ကနဲ့ ဆတ်ကနဲ့ဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ကောင်လီးက ကျနော်ထက်တိုတယ် နည်းနည်း မသိမသာတုပ်တယ်။ခေါ်တုန်းက ဆွပေးပါခေါ်တာ မိန်းမ အဖုတ်ထည်းလည်း ဒီကောင်း လီးဝင်ပြီးနေပြီးဆိုတော့ မထူးပါဘူး
“လိုးကျတော့ ငါ အိမ်သာခနသွားတက်အုံးမယ်”
ဆိုပြီး အခန်းတခါဝက ချောင်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ကျနော် ဘဝကတော့ တခါးကြားမှာ လီးတောင်ပြီး ခါညောင်းနေရတယ်။တကယ်တမ်း ကိုယ်မိန်းမကို တစိမ်းက တက်လိုးနေတာမြင်ရတော့လည်း နှမြှောဝမ်းနည်းစိတ်တွေ ရင်ဘက်ထည်းက လိူက်တက်လာတယ်။
ကျနော် မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျ‌နော် မျော့်လင့်နေတာ တွေ့‌နေ့ ရနေပြီးလေ။မိန်းမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ ဆောင့်ချက် ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ ဝင်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူယဉ်ချင်ခဲ့တာ ကြည့်နေရပြီးလေ။ကျနော် သိပ်လိုချင်ခဲ့တာ ရနေပြီးလေ လို့ဖြေတွေးတော့မှ ကျေနပ်အားရတယ့် ခံစားချက်မျိုး ပြန်ရလာတယ်။
လိုးဆောင့်ချက် ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ကျနော် မိန်းမ အလိုးခံနေရပြီ။ တအင်းအင်း … နဲ့ အံလေးကြိတ်ပြီး ခံစားနေရရှာတယ်။
မိန်းမ မျက်နှာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမူအရာနဲ့ ထွက်နေတဲ့ အသံ၊အလိုးခံနေရတဲ့ မိန်းမတကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။မိုက်တယ်ဗျာ ကြည့်ရတာ
ပင်လည် ဓားမြ စီနေရသလို ရင်တဖိုဖို ပူစပ်ပူလောင်းနဲ့ ဟာတာတာခံစားချက်ရော တွဲပြီးပါနေတယ်။အဝေကြီးက ပြေးလာရသလို ရင်ထည်း မောဟိုက်နေတာပဲ။
လှေကြီးထိုး ပုံစံနဲ့ ဟိုကောင်းက တဖုန်းဖုန်းဆောင့်လိုးတာ။သူများမိန်းမ အလကားရတိုင် ဆောင့်လိုးတာ မီပွင့်မတက်ပါပဲ။ကျနော် မိန်းမလည်း ဘယ်နှစ်ချီး ပြီးလို့ ပြီးမှန်မသိတော့ပါဘူး။အခန်ဝက ကျနော် အသံကြားလို့ ထင်တယ် မိန်းမက လှမ်ကြည့်တာ မြင်သွားတာနဲ့
ကျနော် အခန်းထည်း ပြန်ဝင်လာလိုက်တယ်။
ကျနော်ပြန်ရောက်လား‌တော့ ယောင်္ကျားရှေ့ ဖြစ်သွား‌တော့ မိန်းမ နည်းနည်းတော့ ရှိန်ပြီး ရိူးတို့ရှန်တန်း ဖြစ်သွားသေးတယ်။ဟိုကောင်းကတော့ လီုးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။မိန်းမလည်း ခနပါပဲ ပြီးတာနဲ့ အာရပါရ ပြန်ခံတော့တာပဲ။ပါစပ်က မောင် မောင်နဲ့ တမောင်တည်း မောင်နေတော့တယ်။
” အ အား အားးးးးကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် “
” အားးးးလိုးပါ လိုးပါ “
” ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း”
” အား အား အား “
” လိုးပါ လိုးပါ ပြင်းပြင်းလေး “
” မောင် အား ကောင်းတယ် “
” ကိုကို ရေ အရမ်းကောင်းနေပီ “
” ကိုကို့ ကို အရမ်း ချစ်တယ် နော်”
” ခုလို အကြင်နာတေ ပေးနိူင်လို့ “
မိန်းမရဲ့ အကြည့်တွေမှာ အားနာမှု ကျေးဇူးတင်မှု၊ မချိတင်ကဲ ခံစားရမှု။ အားရမှု .. တွေပါတဲ့ တွေဟာ ကျနော် ပေးလိုးလိုက်ရတာကို စိတ်သက်သာ စိတ်ကျေနပ်စေတယ်။
” လာပါဦး ကိုကို မိန်းမ အနားကို “
” မောင် လိုးနော် ကြမ်းကြမ်းလေး မရပ်လိုက်နဲ့ “
” ကိုကို မိန်းမ စုပ်ပေးမယ် လာ”
မိန်းမ ရဲ့ဘေးထိုင်ကာ မိန်းမပါးစပ်ထဲ ထည့်ပီး စုပ်တာကို ခံစားနေလိုက်တယ်။မိန်းမ အတွက်ကတော့အသာယာဆုံးနဲ့ အလှပဆုံးအချိန်ဖစ်နေတာပေါ့ ။ဟိုကောင့်ဆောင့်လိုက်တိုက် နို့လေးတွေ့က လူပ်ရမ်းနေတယ်။ဟိုကောင်းက ပက်လက်ကို ပေါင်ထမ်းလိုက် ကားလိုက် စိလိုက်နဲ့ လိုးနေတာ တစ်နာရီးကျော်နေပြီး။
ကျနော်လည်း တွေးရင် တွေးရင် အရမ်း နှမြောလာတယ်။အဲ့တာနဲ့ မိန်းမကို တိုလိုက် ဟိုကောင်းကို တို့လိုက်နဲ့ သတိပေးလိုက်တယ်။မရပါဘူး သုံးလေးခါလောက်ရှိတော့ မနေနိုင်လွန်လို့ ပါစပ်က ထုတ်ပြောလိုက်ရတယ်။
“တော်ပြီးလေ နှစ်ယောက်လုံး ငါလည်း မလိုးရသေးဘူး”
ပါစပ်က ဒီတိုင်း လွတ်ခနဲ ထွက်သွားတာ။နှစ်ယောက်လုံးက ချက်ခြင်း ပြန်မေးတယ်။
မချိတင်ကဲနဲ့ ဖြေလိုက်ရတယ်။ရင်ထည်း ငိုချင်သလို လိူက်လိူက်တက်လာတဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်ကို မျိုးချရင်
“မိန်းမ ရေ နင် ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါအုံး”
ဆိုပြီး လီးရှည်ပြီးပြောမိတာ အိမ် အထွက်တခါးဝရောက်တော့ ကျနော် မမြင်တမြင် အနေအထားမှာ နှစ်ယောက်သား အနမ်းတွေ ဖလှည်းရင် ဟိုကောင်းက နို့တွေ ပြန်နယ်နေတယ်။
ဟိုကောင်းက မပြီးသေးဘူး စုပ်ပေးအုံးလို့ ပြောလိုက်တာ မိန်းမ ချက်ချင်းထိုင်စုပ်တာ ပြာနေတာပဲ။အာခေါင်ထောက်အောင်ကိုစုပ်တာ
ခနနေတော့ ဟိုကောင်းက သူခိုင်းတိုင်ရမှန်လည်းသိရော့ ကုန်းပေးအုံး လိုးချင်လို့ပဲပြောရသေး ဖင်ပူတောင်ကို ပြောင်နေအောင် ထောင်ပေးတာ ချောင်းဟမ်းသံ ပေးမှ အမြန်လက်စသပ်ပြီး ဟိုကောင်းက ပြန်သွားတယ်။
စိတ်ထဲ က တွေးလိုက်မိတယ် . ဖူဝေစိုး. ဖူဝေစိုး ငါမှာ နင့်ကို စည်းရှုံးလိုက်ရတာ . ခုတော့ နင် ကိုယ်တိုင် ပိုထန်း နေပါလား အထန် ကြီးရယ် လို့ တွေးလိုက်ရတော့တယ် .
အဲ့ညက ဟိုကောင် ပြန်သွားတော့ မိန်းမ နင်ဘာလို့ စုပ်ပေးတာလည်းဆိုတော့
” သူတောင်မိန်းမ အဖုတ်ကို ရေမဆေးပဲရက်ပေးတာ အားနားလို့လုပ်ပေးတာ”
“အလိုးခံရတာ ကောင်းတယ် နွေးနွေးလေ “
တဲ့ မိန်းမက ရှက်ကို မရှက်တော့တာဗျာ။
အဲ့ညက ဟိုကောင်လိုးခံပုံတွေ မိန်းမထန်ပုံတွေ မြင်ယောင်ပြီး မနားတမ်းကို လိုးလိုက်တာ ဘယ်နှစ်ချီတွေ ဘယ်လိုတွေ လိုးမိလည်းတော့ မသိဘူး။နောက်နေ့ကျ အိပ်ယာထည်း လရေနံတွေ စောက်ချီနံတွေ မွန်ထူးနေတာ။မိန်းမလည်း မထနိုင် ကျနော်လည်း မထနိုင် ဒီတိုင် ခွေခွေလေး ကို နံနံစော်စော်နဲ့နေရတယ်။
နောက်ရက် ပြောပြီးသာ ကတိ အတိုင်ဆိုတော့ မိန်းမ ပြောမရတာနဲ့ နောက် နှစ်ခါ နှစ်ညပေါ့ ပေးလိုးလိုက်သေးတယ်။ဒါပြီးရင် တော်ပြီးလို တစ်ခါတည်း ရတိပြတ်ပြောလိုက်တယ်။
ကပ်ကို ဆိုတာ ကို ယောင်္ကျားက ပေးလိုးတာက အကန့်အသပ်နဲ့ ကြည်ဖြူသလောက်ပဲနော်ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။
ပြောရမှာတော့ ရှက်ပါတယ်။မိန်းမက ဟိုကောင်း လီးကို စွဲသွားတာဗျ။လီးတိုတိုနဲ့ကောင်းကို။အဲ့‌ကောင်နဲ့ ဟိုနေရာမှာ ကုန်းလိုက် ဒီနေရာမှာ ကုန်းလိုက် ကုန်းနေလို့ လိုက်လိုက်ခေါ်ရတာနဲ့ ဆိုက်နဲ့ဝေးတယ်နေရာ ရွေ့လာခဲ့ရတယ်။မနည်းထိန်းလိုက်ရသေးတယ်။
ပဲရှာရှာ ပဲရှားရှား ကိုယ် အနီးအနားက ရှားဖို့ဆို ရေရှည်စဉ်းစာပါဗျ။ကိုယ် ပတ်သတ်ချင်သလောက် အတိုင်းအတာပဲ ပတ်သက်ပါမလား။အမြဲတည့်နေပမလား မတည့်တဲ့ အချိန်ဖွမလား။သူရင်နှိးတည့်သူကို ဘာရယ်မဟုတ်ပြောရာက စကားပျံနှံနိုင်လား ပေါ့ဗျ။ စသဖြင့်ပေါ့……
အောက်ခြေဘဝ ( စ/ဆုံး )